(WAR DEG DEG AH)–Madaxweyne lagala noqday Kalsoonidii | SOMALI SUN |
Aug 14, 2017 - Aragtiyood
Cod ay u qaadeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle Madaxweynaha Hirshabeele ayaa la sheegay in 68 xildhibaan ay u codeeyeen halka ay afar xildhibaan ka soo horjeesteen.
Ma jiro wax weriye ah oo goobjoog ka ahaa kalsoonida lagala laabtay Cali Cabdulaahi Cosoble hase yeeshee qaar kamid ah xildhibaanada Hirshabeelle ayaa u xaqiijiyay jowhar.com in kalsoonida lagala laabtay Madaxweyne Cosoble.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaana Hirshabeelle Marwo Canab Axmed Ciise oo guddoomisay shirkan ayaa ku dhowaaqday in kalsoonida lagala laabtay Madaxweyne Cosoble.
Arrimaha Sababay in Kalsoonida lagala laabto Cali Cabdulahi Cosoble.
Cali Cabdulaahi Cosoble oo ay xilka ka qaadeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay ka maqnaa xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar, hase yeeshee sababaha loo aaneynayo inuu xilkiisa ku waayay ayaa waxaa kamid ah magacaabis uu ku dhowaaqay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo uu ku sheegay inay yihiin degmooyin.
Qaar kamid ah golihiisa wasiirada ayaa u arkay in uu u xaglinayo wasiirada qaarkood kuwa kalana uusan wax tixgelin ah siin. Intii uu shaqeynayay ayaa waxaa si xoog leh u shaqeynayaya wasiirada arrimaha gudaha iyo Maaliyada oo kaliya marka loo eego wasaaradaha kale oo gaaraya illaa iyo 23 wasiir.
Xiriirka kala dhaxeeyay Madaxweyne Cosoble dowlada federalka ayaan ahayn mid wanaagsan iyadoo aysan jirin wasiir ka tirsan xukuumada Xasan Cali Kheyre oo Jowhar habeen kaliya ku hoyday, iyadoo dowlad goboledka Hirshabeelle ay ka soo jeedaan marka la fiiriyo wasiiro muhiim ah ee dowlada federalka sida Wasiirada Amniga,Warfaafinta, Caafimaadka,waxbarashada, boostada iyo isgaarsiinta,dhalinyarada iyo isboortiga iyo qaar kale.
Si kasta ha ahaatee waxaa ay u muuqataa dib u dhac hor leh uu ku yimid dowlad goboleedka Hirshabeelle maadaama mudadii ay dhisneyd aysan wax horumar ah oo la taaban karo uusan maamulku gaarin waxaana adkaan doonto sida la rumeysan yahay sidii dib loogu dooran lahaa Madaxweyne cusub.
Halkan ka dhagayso codka guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Hirshabelle oo ku dhowaaqeysa kalsoonida kala laabashada Madaxweyne